တောင်တွင်းကြီးတွင် ပြည်သူတဦးကို စစ်ကောင်စီတပ်က အ​ကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီးသွား – Buanchukcho
တောင်တွင်းကြီးတွင် ပြည်သူတဦးကို စစ်ကောင်စီတပ်က အ​ကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီးသွား
မ​​ကွေးတိုင်း၊တောင်တွင်းကြီးမြို့မှာ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ ည ၁၁ နာရီခွဲဝန်းကျင် မြို့ပေါ်မှ ဒေသခံပြည်သူတဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေက နေအိမ်ကိုဝင်​ရောက် အကြောင်းမဲ့ လာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီသိရပါတယ်။
စစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီးသွားသူမှာ ကိုစိုင်းစံဟ (ခေါ်) ကိုစိုင်း ဆိုသူဖြစ်ပြီး အုန်းတော ၁ ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်ကာ ဆံပင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်သူဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံတွေဆီက သိရပါတယ်။
NUG အစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာသို့ ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေဆိုက် AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့နှင့် People’s Voices အဖွဲ့မှ ယနေ့ အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၁
NUG အစိုးရ ကျန်မာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ငွေလှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားအား ယနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ(၄:၀၀)၌ Zoom Meeting ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ အလှူငွေ ပေးအပ်လှူဒါန်းပေးအပ်ပွဲ့သို့ NUG အစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာရွှေပုံမှ လက်ခံရယူခဲ့သည်။
အလှူရှင်များ ဖြစ်ကြသည့် People’s Voices အဖွဲ့မှ မြန်မာငွေ ကျပ်သိန်း (၇၀)နှင့် AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့မှ တဆင့် စေတနာရှင်တဦးမှ ထိုင်းဘတ်ငွေ (၁)သိန်းအား ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
NUG အစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန
ဒုတိယ ဝန်ကြီးဒေါက်တာရွှေပုံမှ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း NUG အစိုးရမှ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်နေမှုများနှင့် ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်နေမှုများအား ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့ Zoom Meeting အခမ်းအနားသို့
ဒုတိယ ဝန်ကြီးဒေါက်တာရွှေပုံနှင့် တာဝန်ရှိသူများ
ရွှေဝါရောင် အရှင်ထာဝရ နော်ဝေ (SMD)
The Satellite for Myanmar Democracy (SMD) နာယက
People Voices ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေဆိုက် AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့ မှ ဒါရိုက်တာ ဦးလှခိုင်နှင့် AAC အထွေထွေ တာဝန်ခံ ဦးရဲမင်း (
#The Satellite for Myanmar Democracy (SMD) Japan အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များ
# D-Day Channel မီဒီယာအဖွဲ့ တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ရွှေဝါရောင် အရှင်ထာဝရ (နော်ဝေ)၊
ဒီချုပ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၃)ဦးနှင် NLD O.C (Japan)မှ တာဝန်ခံ အမျိုးသား ကိုယ်စားလှယ် (၃)ဦးပါဝင်သည့် The Satellite For Myanmar Democracy (SMD) အဖွဲ့သည် NUG အစိုးရတာဝန်ရှိသူများနှင့် အရေးပေါ် လိုအပ်သည့် နေရာများသို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် လှူဒါန်းပေးလျှက်ရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေဆိုက် AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့အပါအဝင် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ လှူဒါန်းမှုများအား ချိတ်ဆက် လှူဒါန်းပေးလျှက်ရှိသည်။
SMD အဖွဲ့အနေ့ဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍအပါအဝင်၊ NUG အစိုးရဌာနအသီးသီးနှင့် အရေးပေါ် လိုအပ်သည့် နေရာများသို့ လှူဒါန်းပေးအပ်လျှက်ရှိသည်။
The Satellite For Myanmar Democracy (SMD) နာယကနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ
#ရွှေဝါရောင် အရှင်ထာဝရ (နော်ဝေ) တာဝန်ခံ
ဦးမြင့်လွင် (၂၀၁၅-၂၀၂၀ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ပြည်သု့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်)
ဦးစောသလေးစော (၂၀၁၅-၂၀၂၀ ရွှေကျင်မြို့နယ် ပြည်သု့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်)
ဒေါ်အေးမြမြမျိုး (၂၀၁၅ ကျောက်တန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်>၂၀၂၀ လသာမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်)
(The Satellite for Myanmar Democracy) အဖွဲ့ဝင်များ Japan.
The Satellite For Myanmar Democracy
Rev. N C Thawng Tha Thang hi 2021 Chin Person for the Year ah thim awktlaak bakasi ka ti.
Zei ruangah Pu Ngun San Aung (Ex-Minister) kan doh By Salai Ngun San Aung